कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, के के छन नयाँ कार्यक्रम ? पुर्ण पाठसहित – Enayanepal.com
कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, के के छन नयाँ कार्यक्रम ? पुर्ण पाठसहित
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजानिक भएको छ । आज प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले कर्णाली प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन । प्रदेश सरकारले डीपीआर भएका योजनामा मात्र र एक करोडभन्दा ठुला लागत भएका योजनामा मात्र बजेट छुट्टाउने भएको छ । पुर्वाधार विकासका लागि कर्णाली पुर्वाधार विकास वैंक संचालनमा आउने छ ।
परियोजना बैंक स्थापना गरी कम्प्युटर प्रणालीमा संचालन गरिने भएको छ । प्रदेशका योजनाको डीपीआरको लागि इन्जिनिएरिङ कम्पनि स्थापना गरिने भएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा बताइएको छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्धारण गरी न्युनतम आयआर्जन कार्यक्रम संचालन गर्न न्युन आय भएका स्थानिय तहमा सुरु गरिने पनि बताइएको छ ।
काम गर्ने र उद्यम गर्नेलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइनेछ । प्रदेश समन्वय परिषदका पहिलो बैठकका निर्णय कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । स्थानिय तहको साझेदारी मा स्वदेशी तथा विदेशी लगानि आकर्षित गरिने छ । उद्योग स्थापनाको लागि बाटो विजुली जस्ता पुर्वाधार तयार गरिने पनि बताइएको छ । पुस मसान्तभित्र लगानि सम्मेलन गरिने छ ।
उद्योग्राम स्थापना गरी कपास र अल्लो खेतिको बजारीकरण गरिनेछ । सम्भव भएसम्म सरकारी कार्यालयमा स्थानिय उत्पादन गरिने पनि बताइएको छ । राषट्रीय र अन्तराष्ट्रीय गैरसरकारी संस्थाहरुलाई पारदर्शि बनाई नियमन र सहजिकरण गरिनेछ । कर्णालीको पानि सबैको लगानिको अवसर कार्यक्रम लागु गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ ।
उज्यालो कर्णालीको अभियान संचालन गर्न नेपाल सरकारसंग समन्वय गरी भेरी बबई डाईभर्सनमा लगानि गरिनेछ । सोही ठाउँबाट थप ९ मेगावाट नयाँ विजुली उत्पादन गरिने छ । डोल्पा जगदुल्ला विदुत उत्पादन गर्न लगानी गरिनेछ । साना विद्युत परियोजना संचालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ ।
स्थानिय तहको केन्द्रबाट जिल्ला सदरमुकाम र प्रदेश राजधानी जोड्ने सडक निर्माण गरिनेछ । एक जिल्लामा कम्तिमा एक सडकलाई प्रदेश महत्वको आयोजनाको रुपमा राखिनेछ । एक घन्टाबढि फेरो लगाउने ठाउमा पुल निर्माण गरिने छ । तुइन पुर्ण रुपमै हटाइने छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा सार्वजानिक यातायात संचालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । यातायात विदुत, खानेपानी प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सहजै उपलव्ध गराइनेछ । चिंगाडको पानि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा ल्याउन डीपीआर बनाइनेछ ।
नेपाल सरकारकोसंग सहकार्यमा भेरी लिफ्ट पानि वीरेन्द्रनगरमा ल्याइनेछ । सार्वजानिक सौचालय निर्माण अभियान संचालन गरिने छ । स्थानिय तहसंगको सहकार्यमा सिंचाई , कुलो आकाशे पानि संकलन गरिने छ । दलित विपन्न र जोखिमयुक्त वस्तीलाई स्थानान्तरण गरि एकिकृत वस्ति स्थापना गरिने पनि बताइएको छ । एकिकृत वस्ति विकासका लागि समभाव्यता अध्ययन गरिनेछ । जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ ।
पर्वतिय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गरिने छ । मेडिकल कलेज संचालन गरिने छ । एक जिल्ला १एक बहुप्राविधिक विद्यालय कार्यक्रम संचालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । दुई वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरिने छ । कालिकोट, जुम्ला, मुगु, डोव्पा र हुम्ला जिल्लामा नमुना स्कुल स्थापना गरिने छ । कर्णालीको भुगोल सुहाँउदो पाठ्यक्रम स्थापना गरि प्रदेशभर लागु गरिनेछ । छोरी बुहारी छात्रवृती, उच्चशिक्षा छात्रवृती संचालन गरिने छ । दरवन्दि नभएका स्कुलमा स्वएमसेवक बनाई परिचालन गरिने पनि बताइएको छ ।
छोरीको लालनपालन को भेदभाव, बालविवाह रोक्न समान अवसरहरु प्रगान गरिनेछ । दलितको छुवाछुत हटाउन वातावरण सिर्जना अजा विवाहा प्रोत्साहान । मुख्यमन्त्री महिला तथा दलित आयआर्जन कार्यक्रम संजालन गरी रोजगारी सिर्जना गरिने छ । राउटेको जस्ता लोपोन्मुख समुदायको संरक्षण विकास र जिविकोपार्जन गर्न सहयोग गरिनेछ । प्रदेश अस्पताल ३०० सैयासित शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गरिनेछ । जिल्ला अस्पतालहरुलाई कम्तिमा ५० सैया सम्मको विशेषज्ञ सेवा प्रदान गरिने छ । स्थानिय तहमा १५ सैयाको अस्पताल स्थापना गर्न आवश्यक सहयोग गरिने छ । स्थानिय तहको समन्वयमा हुम्ला, डोल्पा, मुगु जुम्ला र जाजरकोटका स्वास्थ नभएका वडामा स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्था गरिनेछ । हवाई उदार सेवा विस्तार र कार्यान्वयन गरिने छ । एक स्थानिय तह, एक एम्वुलेन्स संचालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । सवै नागरिक स्वास्थ्य विमामा संगलगन हुन नेपाल सरकारसंग समन्वय गरिनेछ । प्रदेश असपताल परिसरमा पुनरस्थापना केन्द्र स्थापना गरिने पानि नीति तथा कार्यक्रममा बताइएको छ ।
ज्यालामा सुधार , रोजगारी प्रवन्ध गरिने छ । स्थानिय तहको समन्वयमा श्रम सहकारी स्थापना गरिने छ । मुखमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन गरिने छ । सिपविकास तालिम, रोजगारिका परामर्श सबै जिल्लामा गरिनेछ । कर्णालीमा खेलको विकास गरि सबैलाई खेलकुद प्रति आकर्षित गरिनेछ । कर्णाली खेलकुद विकास परिषद गठन गरिने छ । उच्च हिमालि क्षेत्रमा रंगसाला निर्माण काम सुरु गरिनेछ । खेलाडिको उत्प्रेणाको लागि काम गरिने पनि बताइएको छ । खस भाषाको उद्गम स्थाल सिँजा र दुल्लुमा सांस्कृतिक संग्राहलय स्थापना गरिने छ ।
सिजामा नेपाली भाषा र साहित्य सम्मेलन आगामी आर्थिक वर्षमै गरिनेछ । सिमिकेट, रारा से-फोकसुन्डोमा पुस्तकालय स्थापना गरिनेछ ।आन्दोलनमा घाईते सहित र वेपत्ताको व्यवस्थापन र रोजगारमुलक कार्यक्रम संचालन गरिने छ । कृषीरो सदुपयोग गर्न निजि सरकारी सहकार्य कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । सहकारी र स्थानिय समुदायको सहभागिकामा कृषि बालिको संवर्धन गरिनेछ । बिउ बैकको स्थापना गरिने पनि बताइएको छ ।
प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई प्लास्टिकमुक्त सहर बनाईनेछ । नियमित बजार अनुगमन र गुणस्तर प्रदान गरिने छ । निजि क्षेत्रको सहकार्यमा कर्णाली हवाई सेवा संचालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा बताइएको छ । पर्यटकिय सुचना केन्द्रको स्थापना गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । डिजिडिटल प्रदेशका लागि संरचना विका पनि गरिने भएको छ । यस्तै संचार प्रतिष्ठान गठन गरिनेछ । पत्रकारलाई स्नातकोत्तर अध्ययन गर्न छात्रवृती उपलव्ध गराइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा बताईएको छ ।